Sheegashada TCDD si Gaar ah Gaadiidka Rakaabka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraSheegashada TCDD si Gawaarida Gaadiidka rakaabka
Sheegashada TCDD si Gawaarida Gaadiidka rakaabka
17 / 01 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Headline, TURKEY
tcdd waxay u wareejin doontaa adeegyada gaadiidka rakaabka qaybaha gaarka loo leeyahay
Markay tahay buundooyinka, wadooyinka, dekedaha, warshadaha, iibka ayaa hada soo galay wadooyinka tareenka. Markii ugu horreysay taariikhda Jamhuuriyadda, TCDD waxay isku diyaarineysaa inay ku wareejiso adeegga rakaabka rakaabka qaybaha gaarka loo leeyahay
Markii ugu horreysay taariikhda Jamhuuriyadda, TCDD waxay isku diyaarineysaa inay ku wareejiso adeegyada rakaabka rakaabkeeda qaybta gaarka loo leeyahay.
maalin maalmahaSida ku xusan qaanuunka qabyada ah ee ay diyaarisay Agaasinka Guud ee Xeerka Tareenka ee ay gaartay Burcu Cansu, qandaraaska rakaabka iyo rakaabka waxaa la siin doonaa waaxda khaaska ah. Sida ku xusan qaanuunka qabyada ah, 20 boqolkiiba lacagta lagu qiyaasay waxaa la siin doonaa shirkadda heleysa qandaraaska sabab u ah inay fulinayso waajibaadka shacabka. Shirkadda qandaraaska awoodi doonta inay kordhiso oo yareyso waqtiga adoo isbadal ku sameynaya qandaraaska.
Agaasinka Guud ee Xeerka Tareenka, 'Gaadiidka rakaabka ee waajibaadka adeegga madaniga ah ee xulashada qandaraasyada adeegga dadweynaha, sharciyeynta, hirgelinta iyo nidaamka kormeerka iyo mabaadi'da ay diyaariyeen qabyada'.
Qabyo tirka dhammaan adeegyada kaabayaasha ee ay bixinayso TCDD ayaa lagu sheegay kuwan soo socda:
Booliiska 'tuhmanayaashu' kama qeybqaadan karaan: waxay heleen hindisooyin, hindise-bixiyeyaasha oo dhan waxay dalban karaan 'fur furan' in kasta oo ay jiri doonto ciqaab kama dambays ah oo ku saabsan ururka argagixisada, in kasta oo uu jiro xiriir iyaga la leh, ama uu soo sheegay Agaasimaha Guud ee Amniga.
Tigidhada waxaa loo tixgelin doonaa inay iib yihiin: 'Guddi Qiimeyn' ugu yaraan saddex qof ayaa loo dejinayaa si loo go'aamiyo qiimaha saafiga ah ee waajibaadka adeegga dadweynaha. Guddigan ayaa go’aamin doona qiimaha. Qiimaha lagu qiyaasay socodka tareenka marka la go'aaminayo qiimaha, dhammaan tigidhada waxaa loo qaddarin doonaa sidii iib.
Boqolkiiba 20 macaash ayaa la siin doonaa waajibka dadweynaha: Hindise-bixiyaha waxaa la siin doonaa macaash macquul ah oo boqolkiiba 20 ah qiyaasta qiimaha lagu qiyaasay ee waajibka dadweynaha.
Mushaarka ugu yar ee la shaqaaleysiinayo shaqaalaha: Tareenka xadiidka wuxuu ku shaqeeyaa shaqo khatar ah iyo goobo shaqo oo awoodda ah, in kasta oo shaqaalaha ka shaqeeya shirkadaha tareemada ay maamuli karaan mushaharka ugu yar.
Qandaraaslaha waa la shaqeyn doonaa: Haddii tareennada lagu daro xisaabta gaariga ee ay bixiyeen hindise-bixiyeyaasha lagu wado in lagu xaddido qadka kasta oo lagu caddeeyay gundhigga qandaraaska waxaa laga bixiyaa dhinac saddexaad iyada oo la adeegsanayo habka kiraynta, qiimaha kirada ee lagu dhammaystirayo dhinacyada saddexaad iyo kireeyaha ayaa lagu qaadanayaa aasaas ahaan heshiisyada kirada ee lagu dhammaystirayo gaari kasta oo tareenka ah.
Bixinta lacag bixinta caymiska shilka kadib waxaa la tuhunsan yahay: Markii shilalka dhici kara oo cawaaqibta shilalkaas ay sababaan dhaawac iyo dhimasho, waxaa loo hayaa cidda lagu bixin doono kharashka caymiska.
Tirada shaqaalaha lama cayimin: Immisa shaqaale ayaa loo shaqaaleysiin doonaa inta lagu gudajiraayo adeegga iyo tareenka.
Kuwa aan buuxin shuruudaha waxay sidoo kale ka qaybqaadan karaan hindisada: in kabadan hal wadayaasha tareenka tareenka waxay awood u yeelan doonaan inay kaqeybgalaan hindisada iyaga oo sameeya iskaashi ganacsi. Si kastaba ha noqotee, looma tixgelin doono in dhammaan shuraakada ganacsigu ay fuliyeen waajibaadkoodii ahaa inay kaqeybgalaan hindisada.
Tirada duulimaadyada waa la beddeli karaa: Maalin kasta, toddobaadle, bille, xilli-xilli, dib-u-qorsheyn sannadle ah ayaa la sameyn karaa muddada gudaheeda. Haddii khadadka iyo khadadka cusub lagu daro, tirada safarada waa la kordhin karaa waana la yareyn karaa.
Shirkadaha waxaa la siin doonaa boqolkiiba 30 horumarin ah: Waxaa lasiiyay in qandaraaska uu dhigayo in waajibaadka adeegga dadweynaha, 30 boqolkiiba qiimaha qandaraaska la siin doono lacag bixin hormaris ah iyadoo lagu soo celinayo waraaqda dammaanadda.
'OGAYSIIS KU SAABSAN SHURUUDAHA SHAQAALAHA'
Ururka Shaqaalaha Wada Gaarka ah (BTS) ee xiriirka la leh KESK, oo baaray qabyo qoraalka Xeerka, ayaa ka soo horjeedsaday in si gaar ah loo leeyahay isla markaana ka hor yimid go'aan ka gaaridda howgalka iyada oo la tixraacayo shuruudaha waaxda, in kasta oo kaabayaasha laga soo qaatay miisaaniyadda guud.
Soo jeedinta ay diyaariyeen saraakiisha BTS, qandaraaska lagu eegayo heerka macaashka ee shirkadaha, shirkadaha waxaa la siin doonaa hormar boqolkiiba 30 ah, ceymiska shilalka shilalka ah ee la siinayo cidda bixinaysa shaki, mushaharka ugu yar ee shaqaalaha ayaa lagu dhaleeceeyay in la go'aamiyo.
Gaadiidka Tareenka ee Gaadiidka Gaadiidka ee TCDD
3. Dhiirigelinta Dhimashada Shaqaalaha ee loo gooyey Baarlamaanka
Dhibaatada Dawladeed ee Burburka Wagon Sales
Sheegashada TCDD 20 Thousand Losses Heerka Xiritaanka Xiritaanka Dhaqdhaqaaqayaasha
Poland-Ukraine-Russia 2012 Horyaalka Kubadda Cagta Yurub ee Gaadiidka Rakaabka…
Gaadiidka rakaabka Ukraine ee Ukraine hoos u dhacay by 70 boqolkiiba
Ogeysiiska Qandaraaska: Adeegga gaadiidka rakaabka ee isku dhafan
Gaadiidka rakaabka TCDD
TCDD si ay u habeeyaan Gaadiidka Rakaabka